China aluminium extrusion mveliso kunye nabathengisi | JIAXING
IAluminiyam izixhobo zentsimbi_8826
Iingcango zealuminium ezifakelweyo kunye neefestile
Izixhobo ezingaqhelekanga zealuminium
Aluminium isikwere ityhubhu
Indawo yokuQala: China okanye Ithunyelwe
Isiqinisekiso: Isatifikethi seMill, i-SGS, i-ASTM, njl
MOQ: I-1000KGS okanye i-1000 profiles
Iphakheji: Ukuthumela kwelinye ilizwe ngomgangatho wePallet okanye iTyala
Ixesha lokuzisa: Kwiintsuku ezingama-30 okanye ngokwe-Order
Ixabiso: Ngokwamaxabiso entengiso ngosuku lokubeka iodolo
Igama lebrand: Izinto zasekhaya okanye ezingenisiweyo
Ubungakanani obuqhelekileyo: Ubude buqhelekile ukusuka kwi-0.1 m ukuya kwi-6 m ngokweemfuno zabathengi
I-Aluminium ibonisa ukumelana nokubola okukhulu phantsi kweendawo ezininzi, kubandakanya umoya, amanzi (okanye i-brine), ii-petrochemicals, kunye neenkqubo ezininzi zeekhemikhali.
Iiprofayili zeAluminiyam zihlala zikhethelwa ukuqhuba kombane ngokugqwesileyo. Ngokusekwe kubunzima obulinganayo, ukuhanjiswa kwealuminium kuphantse kabini kunobhedu.
Ukuqhutywa kwe-thermal yeAluminiyam aluminium kumalunga ne-50-60% yobhedu, elungileyo ekulungiseleleni ukutshintshiselana ngobushushu, i-evaporator, izixhobo zokufudumeza, izixhobo zokupheka, kunye neentloko zezilinda kunye neeradiator.
Iiprofayili zeAluminiyam azinamandla, nto leyo ebalulekileyo ebalulekileyo kumashishini kagesi kunye ne-elektroniki. Iiprofayili zeAluminiyam azizitshisi, nto leyo ebalulekileyo ekusetyenzisweni kokuphatha okanye ukuchukumisa ngezinto ezinokutsha neziqhumayo.
Iprofayili ye-aluminium ine-machinability ebalaseleyo.
Amandla athile aqine, amandla okuvelisa, i-ductility, kunye namaxabiso okuqina okuhambelana nomsebenzi.
I-Aluminium iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze, kwaye iipropati ze-aluminium ehlaziyiweyo ziphantse zingabonakali kwi-aluminium yokuqala.
Uluhlu lweempahla kunye nokuhanjiswa: Sinemveliso eyaneleyo kwisitokhwe, sinokunikela ngezinto ezaneleyo kubathengi. Ixesha elikhokelayo linokuba ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 zokubekwa kwestokhwe.
Umgangatho: Yonke imveliso ivela kumenzi omkhulu, sinokunikela nge-MTC kuwe. Kwaye sinokunikezela ngengxelo yovavanyo lweqela lesithathu.
Isiko: Sinomatshini wokusika, ubungakanani besiko obukhoyo.
Egqithileyo Icandelo lealuminium
Iprofayile yealuminiyam yeambrela
Iprofayile yealuminiyam enamazinyo
Iprofayile yealuminiyam yamazinyo
Ukuphola kobushushu bukajongilanga